बलात्कार घटनाका अभियुक्त खोज्न भारतमा सर्च – News Portal
बलात्कार घटनाका अभियुक्त खोज्न भारतमा सर्च
March 23, 2019 epradeshLeaveaComment on बलात्कार घटनाका अभियुक्त खोज्न भारतमा सर्च
देउखुरी, ९ चैत । बलात्कार घटनाका अभियुक्त खोज्न भारतमा सर्च अभियान चलाइएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवाले भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा पाँच बर्षिया बालिकालाई करणी गरेको अभियोग लागेका गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ कोइलावास निवासी २३ बर्षिय दुर्गेश थापालाई पक्राउ गर्न छिमेकी देश भारतको तुलसीपुर क्षेत्रमा खोजी कार्य तिब्र पारिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रहरी प्रमुख गिरिराज भण्डारीले जानकारी दिए ।
करणी अभियोग लागेका थापा कोइलावाससँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार तुलसीपुरको एउटा ढावामा कुकको काम गर्दै आएका थिए । नागरिकता बनाउन ईलाका प्रशासन कार्यालय लमही आउने क्रममा हजुर आमाको घर गढवा–६ चिल्ले बास बस्ने योजना बनाएका थिए ।
चैत ५ गते बेलुका पाँच बर्षिया बालिका चकलेट किन्न पसल गएको मौकामा दुर्गेशले बीच बाटोबाटै मुख थुनेर छेउकै जंगल नजिकको खोल्सामा लगे । मिठाई किन्न पसल गएकी नातिनी नफर्किएपछि हजुर आमाले खोज्न थालिन । हजुर आमाले नातिनी खोज्नु, जंगल नजिकबाट चिच्याएको आवाज आउनु सँगसँगै जस्तो भयो ।
नातिनीको आवाज आएको ठाउँतिर जाँदै गर्दा अभियुक्त त्यहाँबाट भागिसकेका थिए । घटना भएलगत्तै प्रहरीलाई खबर भयो । प्रहरी घटना स्थल पुग्यो । अभियुक्तको खोजी शुरु ग¥यो । बालिकलाई उपचारको लागि लमही अस्पताल लगियो । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि बुटवल लगियो ।
अहिले बालिकको बुटवलमा उपचार भैरहेको छ । त्यहाँ बालिकाको शल्यक्रिया गरिएको छ । अभियुक्त दुर्गेश नातेदार हुन् । बालिकाको हजुर आमाको छोरीको दाइको झट्केको छोरा रहेको बताइएको छ । प्रहरीले घटनाका अभियुक्तलाई खोज्न अभियुक्तका साथीलाई पनि सँगै भारत लगेको छ ।
निःशुल्क अप्रेशन शिविर हुने
भुसालको साथी नेप्कीन
संघीय संरचना अनुसारको नेतृत्व कहिले ?
बह्मकुमारीमा सामूहिक रक्षाबन्धन
August 16, 2019 epradesh